Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Degmada Hurwaa. – Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Degmada Hurwaa.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey weerar culus ku qaadeen fariisinka Maleeshiyaatka dowlada Farmaajo ay ka sameysteen dhismaha Shaneemo Cabdi Waayeel ee ku taala degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyada kala duwan,waxeyna Goob joogayaal xaqiijiyeen iney jirto khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo maleeshiyaatka Murtadiinta lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Dagaalkan ayaa kusoo aadaya xilli habeen hore ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay weerar qorsheysan oo dagaal toos ah ay ku qaadeen isbaarada maleeshiyaatka Murtadiinta ay dhigteen afafka hore daaraha Caymiska ee degmada Yaaqshiid kaasi oo sidoo kale khasaara lagu gaarsiiyay maleeshiyaatka Maamulka Farmaajo.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 29-12-1439 Hijri.
Next: Weerar Askar Fara Badan Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Gobalka Aruzjaan.